प्रदेश १ का हेभिवेट नेताहरूका गृहनगरमा यस्तो छ चुनावी अंकगणित :: राजु अधिकारी :: Setopati
विराटनगर, वैशाख २७
स्थानीय चुनाव प्रचारको अन्तिम प्रहरमा ‘हेभिवेट’ नेताहरू आ–आफ्नो गृहपालिकामा अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्।
अन्तिम चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नेदेखि घरघरै पुगेर मतदातालाई भेट्नेसम्मका गतिविधिमा हेभिवेट नेताहरू सक्रिय बनेका हुन्।
आफ्नो पालिकामा दलका उम्मेदवार कसैगरी जिताउनु पर्ने दबाबमा रहेका नेताहरू मतदाता प्रभावित पार्न गृहनगरमा खटिएका हुन्।
यतिबेला प्रदेश १ को झापामा सबभन्दा धेरै हेभिवेटहरूको सक्रियता छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायतका नेताहरू आ–आफ्ना दलका उम्मेदवारहरूको कार्यक्रममा सहभागी भएर सम्बोधन गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, एमाले नेता योगेश भट्टराईहरू पनि आ–आफ्नो गृहजिल्लामा चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्।
सबैजसो नेताहरू आ–आफ्नो दलको अवस्था बलियो रहेको दाबी गरिरहेका बेला हेभिवेट नेताहरूको गृहनगरमा कसको अवस्था के छ ? २०७४ को चुनावी नतिजा र अहिलेको समीकरणले तय गरेको अवस्थाबारे लेखाजोखा गरौं।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भक्तपुर बालकोटमै मतदान गर्छन्। तर, उनको घर झापाको दमकमा पनि भएको र उनको निर्वाचन क्षेत्र झापामै रहेका कारण दमक उनको गृहनगर भनेर बहुप्रचारित छ।
यसपटक सत्ता गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परेर दमकमा एक्लिएको एमालेका लागि विरासत रक्षाको चुनौती थपिएको छ। त्यसैले ओली दमकमा बढ्ता नै केन्द्रित छन्।
सोमबार झापा आएर उनले निवासमै कार्यकर्ताहरू भेटेका छन् भने मंगलबार दमक,, गौरादह, गौरीगन्ज कमल गाउँपालिका लगायतका ठाउँमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्दैछन्। यी सबै स्थानीय तह ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्। यसअघिको निर्वाचनमा गौरादहमा कांग्रेसले, गौरीगन्जमा राप्रपाले र कमलमा गोला तानेर एमालेले जितेको थियो। यसअघि नै गुमाएका मुख्य दुई पालिकाको चिन्ता र दमकको चुनौतीलाई एमाले पंक्तिले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएको छ। २०७४ को मतपरिणाम अनुसार दमकमा गठबन्धनको पक्षमा २० हजार ९२ मत देखिन्छ भने एमालेको मत १० हजार ८०६ मत हो। अघिल्लो पटक एमालेले जितेको दमकमा अहिले गठबन्धन ८ हजार ७०६ मतले अगाडि देखिन्छ।
दमकमा गठबन्धनबाट मेयरमा राप्रपाका राम थापा र उपमेयरमा कांग्रेसकी रेगिना भट्टराई उम्मेदवार छन्। नेकपा एमालेले मेयरमा निवर्तमान उपमेयर गीता अधिकारी र उपमेयरमा अम्बिका खनाललाई मैदानमा उतारेको छ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहनगर झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा तीन दिनयता उनी चुनावी सभामा सक्रिय छन्।अघिल्लो चुनावी नतिजा अनुसार मेचीनगरमा पनि गठबन्धन दल सहज अवस्थामा देखिन्छन्। गठबन्धन दल नेकपा एमालेभन्दा ९ हजार ५८७ मतले अगाडि छ।
अघिल्लो पटक कांग्रेसले जितेको मेचीनगरमा गठबन्धनको मत २८ हजार ७७० र एमालेसँग १९ हजार १९२ देखिन्छ।
मेचीनगरमा गठबन्धनबाट मेयरमा कांग्रेसका इन्द्र बुढाथोकी र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका प्रकाश भण्डारी उम्मेदवार छन्। एमालेले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा गराएर गोपाल बुढाथोकीलाई मेयरमा उम्मेदवार बनाएको छ भने उपमेयरमा निवर्तमान उपमेयर मीना उप्रेतीलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ।
मेचीनगरमा उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीबाट शारदा शर्मा र एमाले त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डिल्लीराम घिमिरे पनि मैदानमा छन्।
कुनैबेला कांग्रेस नेता सिके प्रसाईको र २०५६ मा केपी ओली लडेको क्षेत्रमा पर्ने विर्तामोड नगरमा पनि गठबन्धन र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
अघिल्लो निर्वाचनमा मेयर र उपमेयर एमालेले जितेको विर्तामोडमा गठबन्धन ११ हजार ३२४ मतसहित अगाडि छ भने एमालेसँग ९ हजार ११२ मत रहेको देखिन्छ। त्यहाँ गठबन्धनको मत २ हजार २१२ ले अगाडि छ।
विर्तामोडमा गठबन्धनबाट मेयरमा कांग्रेसका भोजराज सिटौला र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका सिपी कडरिया उम्मेदवार छन्। नेकपा एमालेले मेयरमा निवर्तमान उपमेयर पवित्रा महतारा र उपमेयरमा नगेन्द्र संग्रौलालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
त्यस्तै, गठबन्धनबाट बाहिर रहेको एकीकृत समाजवादीबाट पत्रकार तीर्थ सिग्देलले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको गृहनगर भद्रपुर नगरपालिकामा गठबन्धन एमालेभन्दा झिनो मतान्तरले मात्रै अगाडि छ। अघिल्लो पटक ११ हजार ४२ मत मत ल्याएर एमालेले जितेको भद्रपुरमा गठबन्धनको मत ११ हजार ३४९ थियो। गठबन्धन एमालेभन्दा ३०७ मतमात्र अगाडि रहेकोले भद्रपुरमा प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ।
भद्रपुरमा गठबन्धनले मेयरमा कांग्रेसका गणेश पोखरेल र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका शिवकुमार राजभण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
नेकपा एमालेले मेयरमा असारु राजवंशी र उपमेयरमा कौशिला अधिकारीलाई मैदानमा अगाडि बढाएको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने नेपालकै होचो भू-भाग झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा राप्रपा कांग्रेस–एमालेको घेराबन्दीमा छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीविरूद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरेका छन्। कांग्रेस एमालेको गठबन्धनसँग ९ हजार ३२४ मत छ भने राप्रपासँग ५ हजार ८१६ मात्र छ।
कचनकवलमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबाट अध्यक्षमा कांग्रेसका कलेन्द्रप्रसाद राजवंशी र उपाध्यक्षमा एमालेका नवराज भट्टराई उम्मेदवार छन्।
राप्रपाले निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष अन्जार आलमलाई नै पुनः अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ।
प्रदेश १ को एकमात्र महानगर विराटनगरमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला एक साताभन्दा बढी समयदेखि चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकांश वडा पर्ने महानगरमा उनकै जोडबलमा गठबन्धनबाट उनीनिकट कांग्रेसका नागेश कोइराला मेयर उम्मेदवार छन्।
सेतोपाटीले महानगरका सबै वडामा पुगेर मतदाता भेट्दा गठबन्धनका नागेश सहज अवस्थामा देखिएका छन् भने उनलाई एमाले उम्मेदवार सागर थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश यादवले टक्कर दिँदैछन्।
२०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले गठबन्धन बनाएर लडेका थिए।
यस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि गठबन्धन थियो। निर्वाचनमा कांग्रेसले भारी मतान्तरले बाजी मारेको थियो।
यस पटक एमालेबाहेक ती गठबन्धनका सबै शक्ति कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा छन्। त्यसबेला एमालेसँग गठबन्धन गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भइसकेको छ भने माओवादी केन्द्र र मधेसी जनअधिकार फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी) गठबन्धनमै छन्।
महानगरमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका नागेश कोइराला मेयरमा र जसपाका अमरेन्द्र यादव उपमेयरमा उम्मेदवार बनेका छन्। नेकपा एमालेले मेयरमा सागर थापा र उपमेयरमा शिल्पा निराला कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम अनुसार मेयर विजेता भीम पराजुलीले २३ हजार ३१ मत पाएका थिए भने एमालेका विनोद ढकालले १७ हजार ३२१ र संघीय समाजवादी फोरमका उमेश यादवले १४ हजार ९५८ मत पाएका थिए।
वडाहरूमा पार्टीहरूले पाएको मत अनुसार मेयरमा करिब ७ हजार लोकप्रिय मत पराजुलीले पाएका थिए। किनकि कांग्रेसका वडाध्यक्षहरूको मत १६ हजार ७६६ थियो।
वडाध्यक्षमा एमालेको १६ हजार २१८, संघीय समाजवादी फोरमको १० हजार ९३२, माओवादी केन्द्रको ८ हजार, राप्रपाको ४ हजार २९१ र फोरम लोकतान्त्रिकको ४ हजार ४५२ मत थियो। वडाध्यक्षहरूको मतको आधारमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनको मत ४० हजार १५० पुग्ने देखिन्छ। जुन एमालेले पाएको मतभन्दा दोब्बर बढी अर्थात् २३ हजार ९३२ हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको गृहजिल्ला इलामको सूर्योदय नगरपालिका उनको गृहनगर पनि हो। केही दिनयता उनी इलामसहितका प्रदेश १ का जिल्लाका चुनावी सभामा व्यस्त छन्। त्यसमध्ये पनि उनी सूर्योदयमै बढी केन्द्रित छन्।
अघिल्लो चुनावमा मेयर–उपमेयरसहित बहुमत सिट सूर्योदयमा एमालेले जितेको थियो। एमाले विभाजित हुँदा सूर्योदयका उपमेयर बाहेकका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए।
२०७४ मा मेयरमा रणबहादुर राईले १९ हजार ९ सय १९ मत ल्याएर जित्दा कांग्रेसले १० हजार ३ सय २९, माओवादीले १ हजार ५ सय ४१ र संघीय समाजवादी फोरमले १ हजार ४ सय ७७ मत पाएका थिए। रणबहादुर राई अहिले गठबन्धनबाट फेरि उम्मेदवार छन् भने एमालेले प्रदेश सभाबाट राजीनामा गराएर काजीमान कागतेलाई मेयरमा उठाएको छ।
सूर्योदयमा पहिलोपटक एकीकृत समाजवादी चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका कारण उसले एमाले मत कति तान्छ भन्ने कुरामा गठबन्धनको भविष्य निर्भर हुनेछ।
एमाले नेता तथा संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको गृहनगर इलाम नगरपालिकामा पनि यसअघि एमाले विजयी भएको थियो। नेता नेम्वाङ केही दिनयता इलाममा सक्रिय भएर चुनावी कार्यक्रममा सहभागी छन्।
२०७४ मा एमालेका विजेता उम्मेदवार महेश बस्नेतले ११ हजार ३३ मत ल्याउँदा कांग्रेसले ९ हजार २ सय ६८, माओवादीले ९ सय ६३ र संघीय समाजवादी फोरमले १७४ मत पाएका थिए। यहाँ पनि अहिले सत्ता गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कोतिर रहेर प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेबाट धिरेन चेम्जोङ र गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसबाट केदार थापा मेयर उम्मेदवार छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २७, २०७९, ०२:५७:००